နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > hardware Tools များ > အတိုင်းအတာ Tools များ > Vernier Caliper
အဆိုပါ Vernier Caliper ၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
ပိုရိုးရာ caliper မှတစ်ဦးကအပြောင်းအလဲတစ်ခု vernier scale ကို၏ပါဝင်လျက်ရှိ၏ ဒီကိုတိုက်ရိုက်ပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာရယူဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ Vernier calipers တစ်လျှောက်ရွှေ့ပြောင်းဦးခေါင်းနှင့်ဆလိုက်မှပူးတွဲပါသောအာကာသယာဉ်၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပြည်တွင်းရေးအတိုင်းအတာ (ညာမှာပုံထဲတွင် uppermost မေးရိုးကို အသုံးပြု. ), အပုံနိမ့်ပါးရိုးကို အသုံးပြု. ပြင်ပရှုထောင့်တိုင်းတာနှင့်ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. အတိမ်အနက်ကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်၏ဗဟို။ ဒါဟာအာကာသယာဉ်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြားတိုင်းတာရေးကိရိယာများအဘို့အခက်ခဲသက်သေပြစေခြင်းငှါနက်ရှိုင်းသော groove သို့ရနိုငျပါ။
အဆိုပါ vernier အကြေးအတိုင်းအတာ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မက်ထရစ်နဲ့လက်မနှစ်ခုလုံးကိုတိုင်းတာပါဝင်နိုင်သည်။ လေ့စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြု Vernier calipers တစ်ဦးတစ်မီလီမီတာ (10 မီတာ) ၏ရာစေ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလက်မတဦးထောင်ဖို့တိကျပေးသညျ။
အဆိုပါ Vernier Caliper ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
အဆိုပါ Vernier Caliper ၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
LCD ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် Vernier Caliper
1. ကို ABS / Holdings / TOL Button လေး
2. မီလီမီတာ / လက်မပြောင်းလဲမည်
3. သုည setting ကို
တဦးတည်း 1.5V ဘက်ထရီအားဖြင့်အပေါ် 4. စတင်ရန်
5. Operating အပူချိန်:0ကို C ~ +40 ကို C
6. သိုလှောင်အပူချိန်: -20 ကို C ~ +70 ကို C
ဒဿမကိန်းစနစ်က: 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 ရရှိနိုင်
လျှောက်လွှာ: သူတို့ကထိုကဲ့သို့သတ္တုထည်လုပ်ငန်း, စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ, gunsmithing, handloading, လက်သမား, woodturning အဖြစ်အများအပြားနယ်ပယ်များတွင်နဲ့ဆေးပညာအသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါ Vernier Caliper ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
2. Artificial သားရေအိတ်
4. customerâ€™ s ကိုလိုအပ်ချက်အရ
shipping: ပင်လယ်ပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်customerâ€™ s ကိုလိုအပ်ချက်အရသိရသည်။